Myanmar Meditation centre, Monasteries Web Directory
Myanmar Meditation Centre websites
There are5total websites for Myanmar Meditation Centre sub-category under Monasteries sector in our directory. If you ownawebsite which is solely related to Myanmar people, please feel free to add to this directory thanks.
သဲအငျးဂူ (၃၂) ဝကျဘျဆိုဒျကို အငျတာနကျ၌ တငျထားခွငျး၏ ရညျရှယျခကျြသညျ မိမိတို့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြား မလှဲသာ၍ တိုငျးတပါး၌ သှားရောကျ စီးပှားရှာနရေသဖွငျ့ ဘာသာတရားနှငျ့ ကငျးဝေးနကွေရသညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ ကိုယျခငျြးစာတရားထားကာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ အပေါငျးတို့အား သိသငျ့သိထိုကျသောတရားမြား နာကွား နိုငျရနျနှငျ့ ဆရာမရှိသျောလညျး ဆရာနဲ့အတူ တရားကငျြ့ နရေဘိသကဲ့သို့ ဝိပဿနာတရား အားထုတျနိုငျရနျမတ်တာထား ကိုယျခငျြးစာ တရားပှားကာ တရားကငျြ့စဉျမြားကို အခြိနျရသလောကျ အားထုတျနိုငျရနျ အခွခေံဝိပဿနာ တရားကငျြ့စဉျမြားကိုလညျး တငျပွထားသညျ။
မင်္ဂလာဗျူဟာအသင်းချုပ်၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အဖွဲ့(၁၅)ခု ဖွဲ့စည်းပြီး အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပြုကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၉-ခု၊ မေလ(၉)ရက်နေ့က သထုံမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲပါတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်လှ မိဘများအိမ်မှာ ဆွမ်းခံကြွကာ ပရိယတ္တိစာပေများကို ကြိုးစားအားထုတ်ရင်း ပထမငယ်တန်း၊ ပထမလတ်တန်း၊ ပထမကြီးတန်းများကို သထုံမြို့မှ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၂-ခုနှစ်တွင် ဓမ္မာစရိယတန်းကို မေဒိနီကျောင်းတိုက် ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မှ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ တက္ကသိုလ် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉ဝ-ခုနှစ်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း တည်ရောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်လှထံ ကျောင်းမြေကွက် လှူဒါန်းရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်လှမှ တဆင့် ဗိုက်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်အား တင်ပြခဲ့ရာ မြေကွက် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃-ခုနှစ်မှစ၍ ‘‘မင်္ဂလာအေးစာသင်တိုက်’’ကို တည်ထောင်ကာ ပရိယတ္တိ စာပေများကို သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကြီး-လတ်-ငယ်-မူ အောင်မြင်သော သံဃာများ များစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။
Bhikkhu Revata Pa-Auk Meditation Centre
ဆရာကြီး ဦးသန်း၏ ဓမ္မရိပ်သာ
ဦးသန်းရိပ်သာ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ဆရာကြီးဦးသန်း၏ ဓမ္မခရီးဖြတ်သန်းမှုများနှင့် ဆရာကြီး၏ တပည့် သားမြေးများ၏ ဆက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသော ဓမ္မခရီးလမ်းမှ မှတ်တမ်းများကို ပြုစုတင်ပြထားသော သာသနာပြုဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။